Qorshaha caafimaadka: caymiska daryeel caafimaad guud – Vote Cirro – Presidential Election 2017 Somaliland
„Nolosha qofku way adkaanaysa haddii aanu caafimaad qabin, somaliland waxaa ka jirta dhibaato weyn oo lagu qabo in la helo daryeel caafimaad oo tayo leh. Himilooyinka xisbiga waddani waa ka mid in aynu horumarino caafimaadka sidaas darteed waxaanu hirgelin doonaa caymis daryeel caafimaad ah kaaso daryeeli doona dhamaan bulshada somaliland. Qorshahahaygu waa in la helo daryeel caafimaad oo la isku halayn karo si waddankeenu u noqdo waddan caafimaad qaba.“
Bulshadeenu waxay ubaahan tahay isbedel, cisbitaaladeenu waxay ubaahan yihiin isbedel, kaabayaasha caafimaadkeenu iyaguna isbedel weyn ayay ubaahan yihiin. Taageeradiinu iyo codkiinu waxay lagama maarmaan utahay inaan ka midha dhalino qorshayaasha aanu isbedelka ku samaynayno baahiyaha aasaasiga ee caafimaadku kow ka yahay. Waxaanu idiin ballan qaadeynaa inaanu samayn doono hayad gaar u ah caymiska daryeelka caafiimad, caymiskaaso ku dhisan tabarucaad guud oo qofkasta oo bulshada ka mid ahi ku tabarucayo qiimo yar si aynu u kafaalo qaadno dadkeena jilicsan haddii ay daryeel caafimaad ubaahdaan.
Qorshaha caymiska daryeelka caafimaad waa mid ay usinaan doonaan dhamaan bulshada somaliland oo ay ka qayb qaadan doonaan dhamaan shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa dawlada iyagoo kaga qayb qaadan doona qiimo aad uyar bil kasta kaaso ku xidhan tacrifad go,an oo ay xukuumadu dajin doonto iyo sidoo kale hadba intuu leegyahay gunooyinka shaqaalah.
Tacrifadaha lagu jaan goyn doono caymiska waa sidan;
Tacriifada laga qaadayo
Tacriifad dheeraad ah
< $ 100 bishii bilaash
> $ 100 and < $ 1,000 bishii $ 3 + 3%
> 1,000 $ bishii $ 10 + 5%
Qoysaska saboolka ah lagama qaadi doono wax tabarucaad ah, waxaana laga daryeeli doona caafimaadkooda tabarucaadka caymiska guud. Talaabadan oo muujin doonta sida bulshadeenu u daryeesho inta taagta daran.
Iyadoo laga duulayo odoroska 750,000 shaqaale ee somaliland ka shaqeeya tacriifadaha kala duwana ku bixiya 50%, 30% iyo 20% isku darka tabarucaadkoodu wuxuu gaadhaya $156,000,000 ama boqol iyo lix iyo konton milyan oo dollar. Haddii loo qaybiyo dhamaan bulshada somaliland ku nool waxaa qofkiiba lagu kharash gareyn doona caafimaadkiisa $39.15.
Haddii la odoroso in kala badh ay dadkeenu xanuusadaan sanadkii, kharashka daryeelkooda caafimaad wuxuu sii laban laabmaya $78.30
Inkastoo tabarucaadkaasi aanu ku wada filnayn daryeelka iyo daaweynta odhan haddana waxay wax ka qabanaysa baahiyaha jira. Cuddurada somaliland ka jira badankooda waxaa lagu kharash garayn karaa qiime aan aad ubadnayn haddii la helo daryeel caafimaad oo tayo leh.
Sidee loo uhirgelinaya qorshahan?
Islamarka aanu samayno caymiska caafimaad, muwaadin kasta wuxuu heli doona kaadh caymis iyo nambar ugaar ah kaaso cadeyn unoqon doona inuu qofku si fudud uhelo daryeel iyo daaweyn caafimaad. Kadibna dhaqtarka iyo cisbitaaladu waxay usoo dirayaan hayada caymiska caafimaadka qaansheeg ay ku qoran tahay kharashka daryeelka caafimaad ay ufidiyeen muwaadinka iyo macluumadka kaadhkiisa caymis. Kadibna hayadu waxay bixin doonta kharashkaas.
Wacyigalin iyo baraarujin
Waxaa la samayn doona barnaamijyo waxbarasho iyo wacyi galin si bulshada loogu baraarujiyo ka hortaga iyo xakamaynta cudurada si ay caafimaadkooda u ilaaliyaan.
Side loo maamulaya tabarucaadka kuso hadha sanduuqa caymiska?
Ilaa inta laga helayo dhaqaale ku filan caymiska guud ee daryeelka caafimaad, tabarucaadka soo hadha waxay kusi jirayaan sanduuqa caymiska. Wixii ka badan tabaruucadka loo jaangoyey in loo isticmaalo daryeelka caafimaad waxaa lagu maalgelin doona horumarinta kaabayaasha caafimaad ee somaliland sida cisbitaalo cusub, ambalaasyo, daawooyin iyo goobo caafimaad e guur guura (mobile health units) oo laga hirgalin doono deegaanada miyiga iyo tuulooyinka ay ku yar yihiin adeegyada caafimaad.